Akụkọ banyere Seville, site na n'okporo ámá ya na Pedro el Cruel | Akụkọ Njem
Luis Martinez | | omenala, Sevilla
Seville bụ ebe kachasị mma maka ndị hụrụ ọdịbendị n'anya, na mgbakwunye na njedebe atụmatụ ị nwere ike ime n'obodo, akụkọ ha na akụkọ mgbe ochie dị ọtụtụ dịka ha siri maa mma na ihe ijuanya. Rịba ama na mmalite ya laghachiri ma ọ dịkarịa ala na obodo Rom Hispalis Tọrọ ntọala site na Julius Caesar na narị afọ nke XNUMX BC.
Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, obodo Andalusia nwere nnukwu ike n'oge ochie, mgbe ndị Castilian aristocrats bikọtara ya ọzọ Ferdinand III nke Senti na 1248. Ọbụna karịa n’oge nke Austria, mgbe ọ ghọrọ ọdụ ụgbọ mmiri azụmahịa mbụ nke nwere Worldwa Ọhụrụ na etiti akụ na ụba nke alaeze Spen. Akụkọ ihe mere eme dị otú ahụ bara ụba aghaghị ịmalite ọtụtụ akụkọ akụkọ ifo. Ya mere, ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe akụkọ mgbe ochie nke Seville, anyị ga-agwa gị ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị adọrọ mmasị.
1 Akụkọ banyere Susona mara mma
2 Doña María Coronel na mmanụ esi
3 Isi nke King Pedro nke Mbụ, onye ama ama na akụkọ mgbe ochie nke Seville
4 Nwoke okwute
5 Akụkọ banyere nwa nkita, kpochapụwo n'etiti akụkọ mgbe ochie nke Seville
6 Akụkọ banyere Calle Sierpes
Akụkọ banyere Susona mara mma
Ime ihe ike gara aga nke obodo a na-egosi na akụkọ a bụ akụkụ nke akụkọ mgbe ochie nke Seville. Laa azụ na emepechabeghị, enwere mwakpo na mpaghara ndị Juu nke Seville na, na nzaghachi, ndị Juu na ndị Moors kpara nkata iweghara obodo ahụ.
Iji hazie atụmatụ ahụ, ha zutere n'ụlọ ụlọ akụ ahụ Diego Susan, onye nwa ya nwaanyị mara mma n’obodo ahụ dum. Akpọrọ ya Susana Ben Susan ya na otu nwa okorobịa bụ́ Onye Kraịst abanyekwala na nzuzo.
Ebe ọ bụ na a kpara nkata ahụ n’ezi n’ụlọ ya, ọ maara nke ọma ihe ọ ga-abụ. Atụmatụ ahụ bụ iji gbuo ndị isi obodo ahụ. Nwanyị a na-atụ egwu ndụ onye ọ hụrụ n’anya wee gaa gwa ya ihe na-eme. Ọ maghị na, ime nke a, ọ na-etinye ezinụlọ ya na ndị Juu niile nọ na Sevillia n'ihe egwu.
Nwa amadị ahụ egbughi oge ịdọ ndị ọchịchị aka na ntị banyere nkata ọjọọ a, bụ onye nyere iwu ka anwụchie ndị ndu nke atụmatụ ahụ, tinyere nna Susona. A kwụgburu ha ụbọchị ole na ole Tablada, bụ ebe e gburu ndị omekome kacha njọ n’obodo ahụ.
Susona nọchitere anya na tile na ogige María Luisa na Seville
Nwatakịrị nwanyị ndị obodo ya jụrụ ya, ndị lere ya anya dị ka onye sabo, nakwa nwa amadi nke ya na ya nwere mmekọrịta. Na, site ebe a, akụkọ akụkọ na-enye ụdị abụọ. Dị ka nke mbụ si kwuo, ọ jụrụ onyeisi ndị bishọp nke katidral maka enyemaka, Reginaldo nke Toledo, onye hapụrụ ya ma tinye aka n'ihi na ọ lara ezumike nká n'ebe obibi ndị nọn. N'aka nke ọzọ, nke abụọ kwuru na ya nwere ụmụ abụọ nwere bishọp na, mgbe ọ jụchara ya, ọ ghọrọ onye hụrụ ọchụnta ego Sevillian n'anya.
Agbanyeghị, akụkọ akụkọ ahụ dị n'otu ọzọ na njedebe ya. Mgbe Susona nwụrụ, uche ya mepere. Ọ sịrị na ọ chọrọ ebipụ isi ya ma tinye ya n'ọnụ ụzọ ụlọ ya dị ka ihe akaebe nke nhụjuanya ya. Ka nwere ike ịhụ taa, ọ bụrụ na ị gafee okporo ụzọ ọnwụ, taịl nwere okpokoro isi nke ọ gaara abụ ụlọ Susona. N'ezie, a na-akpọkwa nwata nwanyị ahụ ụzọ ahụ.
Doña María Coronel na mmanụ esi
Akụkọ a sitere na Seville nwere ọtụtụ ihe eji eme ihe nkiri ncha, ọkachasị ịhụnanya na ọchịchọ ịbọ ọbọ. Na mgbakwunye, ọ na-akpọrọ anyị gaa na oge nke nsogbu nke obodo ahụ. Oriakụ Maria Coronel Ọ bụ nwa nwanyị Castilian Maazị Alfonso Fernández Coronel, onye bụ onye na-akwado ya Alfonso XI nke Castile. Ọ lụkwara maka Juan de la Cerda, onye n'aka ya na-agbachitere nwa ya nwoke, Henry nke Abụọ, mgbe o zutere nwanne di ya Pedro M maka nnọchi n'ocheeze.
N'ihi nke a, nke abụọ gburu Don Juan de la Cerda ma nara ya ihe niile o nwere, wee hapụ nwanyị ya di ya nwụrụ. Pedro amaghị m n'onwe ya, mana mgbe ọ hụrụ ya, ọ bụ n'ịhụnanya ya. Otú ọ dị, Doña María Coronel achọghị ịkọ onye nyere iwu ka e gbuo di ya ma banye na ebe obibi ndị mọnk Sevillian Santa Clara.
Ọbụnadị na ọ nwetaghị Pedro I, nke a na-akpọkwa "Obi ọjọọ", ịhapụ nnwale ọ chọrọ ịnwe ya dị ka iko nwanyị. Ruo otu ụbọchị, ka afọ gwụ ya, ọ banyere na kichin ndị nọn ahụ na a wụsara mmanụ esi n'ofe ihu iji gbanwee ya. N'ụzọ dị otú a, o jisiri ike mee Pedro I ka ọ hapụ naanị ya.
Ebe obibi ndị mọnk nke Santa Inés
Ọ ka nwere ike ịhụ ọnwụ nke eze n'aka nwanne ya nwoke Enrique nke Abụọ, onye weghaara akụ a napụrụ ha n'aka ụmụnne nwanyị Coronel maka ịnọgidesi ike n'okwu ha. N'ihi ya, ụmụ nwanyị abụọ a nwere ike ịchọta ebe obibi ndị mọnk nke Santa Inés nọ l'eze-ụlo nna iya. Abbeth mbụ ga-abụ, kpomkwem, Doña María Coronel, onye nwụrụ n'ihe dịka 1411.
Isi nke King Pedro nke Mbụ, onye ama ama na akụkọ mgbe ochie nke Seville
Kpamkpam onye obi tara mmiri Castilian ahụ nwekwara kpakpando n'ọtụtụ akụkọ mgbe ochie ọzọ nke Seville. Iji maa atụ, nke anyị ga-akọọrọ gị. N'otu n'ime ọgba aghara abalị ya n'obodo ahụ, Pedro zutere Gụa nwa Niebla, ezinụlọ nke kwadoro Henry nke Abụọ, dị ka anyị gwara gị onye nwanne ya nwoke. Mma agha ndị a adịbeghị anya ọpụpụ na ndị obi ọjọọ gburu nke ọzọ.
Otú ọ dị, duel tetara agadi nwanyi na o ji oriọna lepụ ya, ụjọ tụrụ ya mgbe ọ matara onye gburu ya, laghachiri imechi ụlọ ya, na-agbadaghị oriọna ọ na-eburu ala. Onye ihu abụọ Pedro kwere ezinụlọ nke onye ahụ nkwa na M ga-ebipụ isi ndị ikpe mara nke ọnwụ ya ma kpughee ya n'ihu ọha.
N’ịmara na agadi nwanyị ahụla ya anya, ọ kpọrọ ya ka ọ bịa n’ihu ya iji mata onye omekome ahụ bụ. Nwanyị ahụ tinyere enyo n'ihu eze wee sị "ị nwere ogbu mmadụ ahụ." Mgbe ahụ, Don Pedro nyere iwu ka ebipụ isi ahụ otu n’ime ihe marble na ha kwanyere ya ugwu ma tinye ya na niche osisi. O nyekwara iwu ka ahapụ igbe ahụ n’okporo ámá ebe ihe ike ahụ mere, ma ka emeghe ya ruo mgbe ọ nwụrụ.
Ọbụna taa ị nwere ike ịhụ bust na n'okporo ámá a na-akpọ, kpọmkwem, Onye isi nke King Don Pedro. Na, icheta akụkọ mgbe ochie a, a na-akpọ onye na-abụghị ya, ebe onye akaebe ahụ bi Okporo ụzọ kandụl.
Isi nke King Don Pedro
Anyị na-aga n'ihu na Middle Ages ikwu banyere akụkọ ọzọ a banyere Seville. Ọ na-egosi na, na narị afọ nke XNUMX, e nwere ebe a na-ere nri na Ezi Ihu okporo ámá, nke dị nso na San Lorenzo, ebe ụdị mmadụ niile kwụsịrị.
Yabụ, ọ bụ omenala na, dị ka Sakrament nke di ngozi, ndị ahụ gbue ikpere n'ala. Mgbe otu ndi enyi nọ n’ebe a na-a barụ mmanya ahụ nụrụ ka ọ na-abịaru nso, ha pụrụ wee gbuo ikpere ka ndị ahụ a na-eme njem na-agafe. Ihe niile ma otu. Oku Mateo "el Rubio" ọ chọrọ ịbụ onye mbụ na-ebo ebubo, na-ebo ndị enyi ya ebubo na a gọziri ha, jiri olu dara ụda kwuo na ya egbughị ikpere n'ala.
Right na oge ahụ, a ụzarị Chineke dabara na Mateo na-adịghị mma na-atụgharị ahụ ya na okwute. Ọbụna taa ị nwere ike ịhụ ahụ mmadụ na ihe ahụ nke oge na-aga n'okporo ámá Buen Rostro, nke a na-akpọ kemgbe ahụ, kpọmkwem, Nwoke okwute.
Akụkọ banyere nwa nkita, kpochapụwo n'etiti akụkọ mgbe ochie nke Seville
Ọ bụrụ n’ịgalarị n’obodo Andalusia, ị ga-amata ezigbo mkpa ọ dị ndị bi na ya Triana nwa nkita, aha ha jiri mee ọtụtụ baptizim na Kraist nke Mmepu. Kwa Izu Nsọ ọ bụla nwanne ya na-akpọpụta ya n'usoro site na basilica ya na gburugburu ikuku.
Ọ gaghị eju anyị anya, ya mere, na n'etiti akụkọ mgbe ochie nke Seville, e nwere ọtụtụ ndị nwere ọnụ ọgụgụ a dịka onye na-akwado ya. Otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu bụ nke anyị ga-agwa gị n'okpuru.
Ọ na-akọ na otu nwa nwanyị gypsy aha ya bụ kpomkwem Nwa nkita M gafere àkwà mmiri Barcas kwa ụbọchị site na Triana, nke dịpụrụ adịpụ n’obodo ahụ, ruo Seville. Otu n'ime ndị hụrụ ya ka ọ na-eme njem ahụ malitere iche na nke ahụ bụ eziokwu ọ gaje ileta nwunye nke ya. Nke ahụ bụ na ya na ya mekọrịtara anụ ahụ́.
Christ of Expiration, nke a maara dị ka "nwa nkita"
Otu ụbọchị, ọ na-eche ya site na ire ere Vela wee maa ya mma ugboro asaa. Ọtụtụ mmadụ bịara mkpu nwa ahụ, ha enweghị ike izere mwakpo ahụ. Otu n’ime ha bụ ọkpụ Francisco Ruiz Gijón, onye n’ikpeazụ ga-abụ onye edemede nke ọnụ ọgụgụ nke Kraịst nke Ọgwụgwụ.
A na-ekwu na ọ wụrụ ya akpata oyi n'ahụ maka ihe mgbu nwa okorobịa ahụ, sitere na ihu ya kpalie ya ka ọ kpụrụ nke Kraịst ahụ ama ama. Site n'ụzọ, ọ gaghị eleta nwunye nke onye ahụ gburu ọchụ, mana nwanne nwanyị nke na ọ nweghị onye matara na nzukọ ha zoro ezo.
Akụkọ banyere Calle Sierpes
Okporo ámá a bụ otu n'ime ndị a ma ama na Seville, mana ọ bụghị ndị niile bi n'obodo ahụ maara ihe kpatara aha ya, nke bụkwa n'ihi akụkọ akụkọ Seville. Ha na-ekwu na, laa azụ na narị afọ nke XNUMX, na ihe a na-akpọ n'oge ahụ Okporo ụzọ Espalderos Beganmụaka malitere ịpụ n'anya n'enweghị ihe kpatara ya.
A nụkwaghị ha ọzọ na ọnọdụ a dị egwu mere ka ụjọ jide ndị bi na mpaghara ahụ. Mgbe ahụ regent nke Seville, Ọ bụ Alfonso de Cárdenas, amaghi ihe imere. Ruo mgbe onye mkpọrọ kwere nkwa idozi ihe omimi ahụ iji gbanwere nnwere onwe ya.
Era Melchor nke Quintana ọ nọkwa l'ụlo-mkpọro kfuru nụ Chileke. Ndị ọchịchị ahụ nabatara ma nwoke ahụ a mara ikpe duru ya gaa ebe e nwere nnukwu agwọ ihe dị ka ụkwụ iri abụọ n’ogologo. O nwere mma n'ime ya, ọ nwụrụ. Ọ bụ Melchior n'onwe ya zutere ya ma gbuo ya.
Sierpes n'okporo ámá
E gosipụtara agwọ ma ọ bụ agwọ na Calle Espalderos iji mee ka obi sie ndị bi na ya ike. A na-ekwu na ha si na mpaghara niile nke obodo ahụ wee hụ ya, kemgbe ahụ, a na-akpọ n'okporo ámá nke Sierpes.
Na mmechi, anyị egosila gị akụkọ mgbe ochie kachasị ewu ewu na Seville. E nwere ọtụtụ ndị ọzọ dị ka Kraist nke ike di uku, nke Santa Librada ma ọ bụ nke Senti Justa na Rufina. Ma akụkọ ndị a ga-ahapụ maka oge ọzọ. Ọ bụrụ na ị nọ n'obodo ahụ, nwee obi ụtọ. Anyị na-ahapụ gị na nke a njikọ ndepụta na njem mmụta ị nwere ike ime site na Seville ọ bụrụ na ị nwere oge iji nyochaa gburugburu ebe obibi, ị gaghị akwa ụta!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Sevilla » Akụkọ banyere Seville